Horudhac: Tottenham Hotspur vs Arsenal… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka North London Derby) – Gool FM
Haaruun July 12, 2020
(London) 12 Luulyo 2020. Kooxda Tottenham Hotspur ayaa maqribnimada maanta oo Axad ah soo dhoweynaysa dhiggeeda Arsenal, waxaana dhexmari doona kulanka loo garanayo North London derby, iyadoo labada kooxood farqiga u dhexeeya kala horreynta horyaalka Premier League uu yahay hal boos iyo hal dhibic.
Kulankan caanka ah waxaa la ciyaari doonaa garoonka Tottenham Hotspur iyadoo Albaabada ay u xiran yihiin markii ugu horreysay, iyadoo ay taas ugu wacan tahay faafaha Coronavirus.
Arsenal ayaa ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan kulankan marka loo eego kooxda ay xafiiltamaan ee Spurs, waxaana ay hal dhibic ka fiican yihiin kooxda ay la ciyaarayaan, halka ay ku han weyn yihiin inay u soo baxaan isreeb-reebka Tartanka Europa League.
Taariikhda: Axad 12 Luulyo 2020
Ciyaaryahanka Kooxda Tottenham ee Dele Alli ayaa markale gaaroomada uga maqnaanaya dhaawac muruqa ah, kaasoo sababay inuu seego labadii kulan ee la soo dhaafay.
Eric Dier ayaa kulankan uu u noqonayaa kiisii labaad ee uu maqnaan doono maadaama ganaax Afar kulan ah lagu riday.
Kooxda Arsenal ayaa ku guuldarreysatay inay racfaan ka qaadato kaarkii casaanka ahaa ee Eddie Nketiah uu qaatay kulankii ay ka horjeedeen Leicester, sidaasi darteed waxaa u bilaabanaya saddex kulan oo ganaax ah.
Calum Chambers, Bernd Leno, Pablo Mari iyo Gabriel Martinelli ayaa dhammaantood dhaawacyo uga maqnaanaya kulankan kooxda martida ah ee Arsenal.
>- Tottenham ayaan laga badinin shantii kulan ee ugu dambeeyay ee ay garoonkeeda ku wajahday Arsenal, waxaana ay ka haysataa 3 guul iyo 2 barbaro.
>- Gunners kaliya halka jeer ee ay shabaqeeda gool kala ilaashatay 10-kii kulan ee la so dhaafay oo ay horyaalka booqatay Spurs waxa ay ahayd kulan 1-0 ay ku adkaadeen oo dhacay bishii Maarso ee sanadkii 2014-kii.
>- Ma jiro kulan Premier League ah oo la dhaliyey rigooreyaal ka badan inta laga dhalieyy kulankan north London derby, waxaana laga dhaliyey guud ahaan 19 gool ku laad.
>- Spurs ayaa hadafkeedu yahay inay badiso saddex kulan oo isku xiga oo ka dhacay garoonka Tottenham Hotspur Stadium markii ugu horreysay tan iyo markii ay saddexdii kulan ee ugu horreeyay horyaalka Premier League ku ciyaareen halkaas bishii April ee sanadkii 2019-kii.
>- Shan ka mid ah goolasha Harry Kane uu ka dhaliyay Gunners ee horyaalka Premier League ayaa ahaa rigoore- kaliya Alan Shearer oo 7 ka dhaliyay Everton ayaa goolal ka badan oo gool ku laadyo ah ka dhaliyay hal koox tartankan.
>- Jose Mourinho waligiis guuldarro kuma uusan gaarin gurigiisa isagoo wajahaya kooxda Arsenal waayihiisa ciyaareed, waxaana uu ka haystaa 5 guul iyo 4 barbaro.
>- Goolkii laga diiday ee uu dhaliyey Callum Wilson oo ka tirsan Bournemouth waxa uu ahaa goolkii lixaad ee Tottenham laga dhaliyo horyaalka Premier League oo markii dambe ay diido aaladda VAR – kaliya Brighton iyo Southampton labadaba toddobo gool oo laga dhaliyey la diiday ayaa ka badan Spurs.
>- Arsenal ayaa eegeysa inay xilli ciyaareedkan guuldarro la’aan ku dhammaysato kulammada horyaalka Premier League ee London Derby markii ugu horreysay tan iyo kal ciyaareedkii 2004-05.
>- Kaliya Liverpool ayaa guuldarro la kulantay kulamo ka yar Arsenal horyaalka xilli ciyaareedkan, iyadoo Gunners ay soo gaartay khasaaro siddeed kulan ah.
>- Gunners ayaa guuleysan karta saddex kulan oo xiriir ah oo ay ku ciyaareyso horyaalka meel ka baxsan garoonkeeda iyadoo aan gool laga dhalin markii ugu horreysay tan iyo bishii may sanadkii 2013-kii.
>- Mikel Arteta ayaa guuldarro la kulmay labo ka mid ah sagaalkiisii kulan ee kulammada North London derby ee uu u saftay Arsenal isagoo ciyaaryahan ah.
>- Bukayo Saka ayaa sameeyey 12 caawin tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, kaliya Kevin De Bruyne oo 19 caawin sameeyey iyo Trent Alexander-Arnold 14 caawin sameeyey ayaa ah xiddigaha Premier League ee ka badan.